Ngobukrelekrele: Uyiqhuba njani ngakumbi i-B2B ekhokelela kwi-LinkedIn yeNtengiso yokuhamba | Martech Zone
I-LinkedIn yinethiwekhi yoluntu ephezulu yeengcali ze-B2B emhlabeni kwaye, ngokuqinisekileyo, lelona jelo libalaseleyo labathengisi be-B2B ukusasaza nokukhuthaza umxholo. I-LinkedIn ngoku inamalungu angaphezu kwesiqingatha sezigidi, ngaphezulu kwe-60 yezigidi zabaphembeleli abakwinqanaba eliphezulu. Alithandabuzeki elokuba umthengi wakho olandelayo uku-LinkedIn… yinto nje yokuba ubafumana njani, unxibelelana nabo, kwaye ubonelele ngolwazi olwaneleyo ababona ixabiso kwimveliso okanye kwinkonzo yakho.
Abameli bokuthengisa abanemisebenzi ephezulu yenethiwekhi yoluntu baphumelele ngaphezulu kwe-45% yamathuba okuthengisa kwaye banamathuba angama-51% okufumana izabelo zabo zentengiso.
Yintoni ukuThengisa kweNtlalo?
Ngaba uqaphele ukuba andikhange ndilibize eli nqaku ukuba ungaqhuba njani ngokuKhokela ngakumbi LinkedIn? Kungenxa yokuba ukusikelwa umda kwe-LinkedIn kuyenza inyanzelise umsebenzi wezentengiso ukusebenzisa ngokupheleleyo iqonga lokuphanda nokuchonga ithemba labo elilandelayo. Unqunyelwe ukuba mingaphi imiyalezo onokuyithumela inyanga nenyanga, zingaphi izikhokelo onokuzigcina, awunokwazi ukubona ukuba ngubani ojonge iprofayile yakho, awunakho ukufikelela kuyo yonke into ekhoyo yokukhangela, kwaye awunakho ukufikelela kumathemba angaphandle kwenethiwekhi yakho kwangoko.
Inyathelo 1: Bhalisela i-LinkedIn Sales Navigator
Ikhonkco yokuThengisa yokuNxibelelana inceda iingcali zentengiso zijolise kubantu abalungileyo kunye neenkampani ngokungazinikeli kulindelo olulungileyo kunye nabenza izigqibo. Nge-LinkedIn Sales Navigator, iingcali zentengiso zinokufumana ulwazi lokuthengisa ngokuthengisa okusebenzayo ngakumbi, hlala unolwazi kwaye uhlaziye iiakhawunti zakho kunye nezikhokelo, kwaye uncede ukujika umnxeba obandayo ube yingxoxo efudumeleyo. Iimpawu zeqonga zibandakanya:
UkuKhokela okuPhambili kunye noPhando lweNkampani Izikhokelo ekujoliswe kuzo okanye iinkampani ezinamacandelo ongezelelweyo, kubandakanya ubukhulu, umsebenzi, ubungakanani benkampani, iJografi, ishishini nokunye.
Iingcebiso zokuKhokela -I-Navigator yokuthengisa iya kucebisa abenzi-zigqibo ezifanayo kwinkampani enye kwaye unokufumana izikhokelo kwidesktop, iselfowuni, okanye nge-imeyile.
Ungqamaniso lweCRM -Thatha ithuba lokuhlala ngokuzenzekelayo, ugcine iiakhawunti kwaye ukhokele kumbhobho wakho ukuya kwiCRM yakho ihlaziywa mihla le.
NgeNtengiso ye-Navigator ngokulula unokugcina umkhondo wesikhokelo kunye nobudlelwane obukhoyo, hlala uhlaziye abafowunelwa kunye neeakhawunti, kwaye usebenzise iqonga ukubheka ngokulula.
Fumana isilingo sasimahla soMncedisi weNtengiso weNethiwekhi
Inyathelo 2: Yakha uLuhlu lwakho lweThemba kwaye ubhale ikopi yakho ebandayo
Kukho igama esilisebenzisa kwi-LinkedIn xa sinxibelelana nomntu kwaye sikhawuleze sabethwa ngumyalezo wokuthengisa ongenakonwaba… I-Pitchslapped. Andiqinisekanga ukuba ngubani oza nekota, kodwa ngokuqinisekileyo kujolise kuko. Kufana nokuvula ucango lwangaphambili kwaye umthengisi kwangoko utsibela emnyango kwaye aqale ukuzama ukukuthengisa. Ndithi "zama" kuba ukuthengisa kwezentlalo akunanto yakwenza nokufaka isandi, kumalunga nokwakha ubudlelwane kunye nokubonelela ngexabiso.
Iqela eCleverly ziingcali ekubhaleni ikopi ebandayo ephumayo efumana iimpendulo. Bacebisa ukunqanda ezi mpazamo zintathu:
Sukungacaci: Gwema amagama e-fluff eshishini kwaye uthethe kwi-niche ethile, ukuze usebenzise i-insider ye-lingo yokusebenzisa. Ukujongwa kweNiching ngamandla kukonyusa amaxabiso okuphendula.
Sebenzisa ubufutshaneNantoni na engaphaya kwezivakalisi ezi-5-6 ithambekele ekubeni skimmed ngaphezulu kwi-LinkedIn, ngakumbi xa ujonga mobile. Xelela umxhasi wakho ukuba ungabenza njani ubomi babo bube ngcono ngamagama ambalwa kangangoko. Uninzi lwemiyalezo esebenze ngokucocekileyo zizivakalisi ezi-1-3.
Nika ubungqina boLuntuUtyekelo lwethemba lokuqala kukungakholelwa kuwe. Ke, kubalulekile ukuba igama liyeke abathengi ababalulekileyo, chaza iziphumo ozifumeneyo, okanye walathe kwizifundo eziyinyani.
Ngobuchule ubhala ulandelelwano lomyalezo olucacileyo, olunencoko, kunye nexabiso eliqhutywa kwithemba lakho.
Inyathelo 3: Sukuncama!
Yonke imizamo yokuthengisa ngokuthe ngqo ifuna ukubanjwa okuninzi ukuze ungene kwithemba. Ithemba lakho lixakekile, basenokuba abanalo uhlahlo-lwabiwo mali, okanye basenokungacingi ngokufumana imveliso okanye inkonzo yakho. Kungenxa yoko le nto kubalulekile ukuba ube nesicwangciso sokulandelelana esingaguquguqukiyo, esihamba kakuhle. Nje ukuba uqhagamshelwe kuwe, ithemba liya kuba luxhulumaniso lwenqanaba le-1, kwaye likunethiwekhi yakho ngonaphakade, ke ubakhulisa ngokulandelelana kunye nomxholo.
Ngobuchule ithumela imiyalezo emi-2 ukuya kwemi-5 kulandelelo, ukuze babonelele ngexabiso kulandelelwano. Umzekelo, chukumisa u-3 uhlala esenza isifundo, ukubonisa iziphumo zakho.
Inyathelo 4: Khulisa isizukulwane sakho seNkokeli ngobuChule
Ukuba oku kuvakala kunzima, unokufuna ukulandela ukusebenzisa Ngococekileyo. Ngobukrelekrele baneqela labo kunye neqonga apho banxibelelana khona namathemba akho egameni lakho kwaye batyhalele isikhokelo kwibhokisi yemiyalezo yabathengisi apho banokusebenzela ukubavalela. Oku kuvumela abathengisi bakho ukuba benze le nto bayenza kakuhle… bethengisa. Shiya ifayile ye- ukuthengisa kwezentlalo ngobuChule!
Ideshibhodi ngobuqili ikubonisa umfanekiso ohlaziyiweyo wemikhankaso yakho ye-LinkedIn, kubandakanya iimetrikhi ezinje ngeNqanaba loQhagamshelo, ireyithi yokuphendula, inani elipheleleyo lezimemo ezithunyelweyo, kunye nenani elipheleleyo leempendulo.
Iqonga lobuqili lidityaniswa ne-LinkedIn ukukunika indlela engcono yokulawula, yokulandela umkhondo kunye nokuphendula kumathemba- kubandakanya ukucofa kunye nokuthumela iitemplate zokukugcinela iiyure zokuphendula.
I-dashboard enobuchule isebenza njenge-LinkedIn CRM eyakhelweyo ukugcina umkhondo wethemba lakho kumjikelo wentengiso. Hluza imiyalezo ngamaPhulo, iithegi, isivakalisi sempendulo, isnuziwe, okanye ayifundwanga ukugcina ulungelelwaniso lwakho lokuthengisa, kwaye ungaze uphoswe yimpendulo kwakhona.
Jonga ulwazi loqhakamshelwano lwalo lonke unxibelelwano lwe-LinkedIn kunye nembali yakho ye-LinkedIn yengxoxo kwithebhu enye. Thatha amanqaku kulo naliphi na ithemba kwaye ungeze iithegi zesiko ukulungiselela ukwahlula ngokulula kunye nokukhangela. Kwakhona, cwangcisa iimpendulo zakho ukuba uphume ngexesha elizayo kunye nomhla ukuze wandise imveliso.
Hluza uqhagamshelo olutsha lwe-LinkedIn ngegama, umkhankaso, iithegi, indawo, umhla, i-imeyile kunye nenombolo yefowuni. Thumela ulwazi loqhakamshelwano kwaye ukhuphele uluhlu loqhagamshelo ngokusekwe kwiiparameter zakho ukongeza kwiCRM yakho.
Nangona ngobuqili kudala imiyalezo yakho yokufikelela kwi-LinkedIn, ungenza ii-tweaks kunye nophuculo olusekwe kwingxelo yomkhankaso. Ukuba ukhetha, unganxibelelana nathi ukuze siqwalasele kwaye ufumane ingxelo ngohlelo lwakho lwemiyalezo.
Yenza imibuzo yakho iphendulwe, funda ukuba ungazisebenzisa njani izinto zedashboard, kunye nokufumana ulwazi kwimikhankaso eqhuba kakuhle ukuguqula amathemba angaphezulu.
Ngobuqili ineqonga elikunika umfanekiso ohlaziyiweyo wemikhankaso yakho ye-LinkedIn, kubandakanya iimetrikhi ezinje ngeNqanaba loQhagamshelo, ireyithi yokuphendula, inani elipheleleyo lezimemo ezithunyelweyo, kunye nenani elipheleleyo leempendulo. Ngalo lonke ixesha ufumana impendulo efanelekileyo kwi-inbox yakho ye-LinkedIn, ngobuqili ukukwazisa nge-imeyile.
Fumana udliwanondlebe lwaSimahla ngokuCoca
Ukubhengezwa: Ndililungu le Ikhonkco yokuThengisa yokuNxibelelana kwaye Ngococekileyo.
tags: b2bb2b ukukhangelab2b ukuthengisa kwezentlalongobuqiliukubanda okubandayofumana izikhokeloimeyileii-imeyileLinkedInikhonkco lokuthengisa elinxibelelanisiweyoUkucingelaukuthengisa kwezentlalo